100ar ny fandraisana anjara amin'ny vidin'ny sakafo kaly tsinjo. Raha 4% n'ny Malagasy no misitraka azy manerana ny Nosy, satria hoe tsy Antananarivo ihany no omena = 25 000 000 x 4% = 1 000 000 olona Heverina fa lany anakaramana ireo mpiasa sy kojakoja fanasam-biliha izay 100ar fandraisana anjara izay. Vola lany amin'ny sakafo, izay ny fanjakana no hiantoka azy 2000ar x 1 000 000 repas/j = 2 000 000 000ar/j x 30j = 60 000 000 000ar/mois (Ny alahady moa tsy ao anatiny fa ny volana misy 30 sy 31, dia tsoritsika ho 30 andro ihany) Raha 4 volana no ezahina hisian'izay kaly tsinjo izay dia heverina andany 240 000 000 000ariary izany. Vola lany ambolena vary 1ha hamokatra vary 4tonnes vary akotry = 1 100ar/kg x 4 000kg = 4 400 000ar/haLany kaly tsinjo 240 000 000 000ar (04 volana famokaran'ny vary) mahavita 240 000 000 000ar/4 400 000ar = 55 000ha = 220 000tonnes = 220 000 000kg.
11 febroary 1975 - 11 febroary 2021, feno 46 taona lasa izay no maty voatifitra ny Kolonely Richard Ratsimandrava. Teo Ambohijatovo no nisy tifitra variraraka niantefa tamin'ny fiara 404 mainty nitondra azy hamonjy fodiana, ny harivan'io 11 febroary 1975. Mifamahofaho ny resaka teo, ao ny milaza fa efa maty talohan'ny tifitra teo Ambohijatovo izy, fa natao hanafenana izany ny tranga teo. Ny hafa indray milaza fa ny tifitra nataon-dry Zimbo teo amin'io toerana io no nahafaty ny Kolonely Ratsimandrava. 46 taona aty aoriana dia mijanona ho mistery ny namonoana azy. Hisy anio ny lanonam-pahatsiarovana ny nahafatesany, hatao eo Ambohijatovo misy tsangambato fahatsiarovana azy. Ampahany amin'ny tantarany :
Raha ny fanadihadiana natao dia tratra niaraka tamin'ilay volamena 73.5kg tany Afrika atsimo vola vahiny 200 000euro eo. Raha ny fiaramanidina 5R-ASB dia fiaramanidina tsy mahazaka raha tsy 400kg eo ihany, entana sy ny mpandeha. Izy anefa mila kerozene 1300kg eo vao tonga Johannesburg, raha 300kg no ilainy hatreo Toliara, Tao anefa izy mbola nanampy solika 600kg teo. Ny sidina nataony raha niala tamin'ny 31 desambra 2020, dia efa nandeha 1000m teo amin'ny piste vao tafahainga, nefa 800m eo no ilainy isan'andro, izany hoe tena navesatra izany ilay fiaramanidina satria feno ny solika nentiny.
Ny Lalampanorenana malagasy dia milaza : "Andininy 63. - Ny Governemanta dia ahitana ny Praiminisitra sy ny Minisitra. Izy no manatanteraka ny politika ankapoben’ny Fanjakana. Izy no tompon’andraikitra eo anoloan’ny Antenimierampirenena araka ny fepetra voalazan’ny andininy faha-100 sy faha-103 etsy ambany. Ny Governemanta no mampiasa ny Fitondran-draharaham-panjakana. Andininy 65.- Ny Praiminisitra, Lehiben’ny Governemanta no : 1° mitarika ny politika ankapoben’ny Fanjakana ; 2° manana fahefana eo amin’ireo mambra ao amin’ny Governemanta izay izy no mitarika ny asa, sy tompon’andraikitra amin’ny fandrindrana ny asan’ny minisitera ary koa ny fanatanterahana ny fandaharanasam-pirenena rehetra momba ny fampandrosoana ;
Raha ny horonan-tsary fanaraha-maso ny seranam-piramanidina tao Toliara no jerena dia teo amin'ny 6ora10min teo, ny alakamisy 31 desambra 2020, no tonga tao an-toerana ilay fiaramanidina 5R-ASB nitondra ilay volamena 73.5kg. Hita tamin'ny sary tao Ivato, fa nisy valizy lehibe mavesatra nahiditra an-tsokosoko tamin'ny 4ora49 maraina, ora tao an-toerana, ny alakamisy 31 desambra 2020, tao anaty fiaramanidina tsy nandalo fisavana. Teto Toliara kosa, ny zavatra tsikaritra dia nisy ny mpikirakira ny caméra, izay nampiseho fotsiny ny laharan'ny fiaramanidina, dia avy eo nahondrika ny camera tsy ahitana ny zavatra mitranga, ka ny tarmac tsy nisy ny zava-nitranga no tena nalainy sary. Teo hatrany io mpikirakira sary io satria dia mihetsika hatrany ny toerana alainy sary saingy ahondriny hatrany ny camera. Ireo mpandeha, sy ireo tompon'andraikitry ny seranana, dia samy tsy mitsahatra ny maka sary, ao ny mpiasa maka sary mihafina, dia samy miantso an-telefoanina avy ny mpandeha sy ny mpiasa, ary dia miverina maka sary indray.
jeudi, 04 février 2021 10:25
Mahafinaritra rehefa mihaino ny hetahetan'ny olona ary arabaina amin'ny ezaka vita.
Misy ny ezaka anafoana ny hetra alaina amin'ireo olona kely karama, ary noferana amin'ireo mandray karama ambonimbony ihany ny IRSA. Hita fa nahitsy ilay resaka lava-drano ka rano vita fanadiovana no aroso ho sotroin'ny olona fa tsy rano mbola ampangotrahana. Tandremana ihany anefa na izany aza ny fikorontanan'ny nappe phréatique eto Antananarivo renivohitra, satria raha maina ny ao ambany dia mety hihotsaka ny tany, satria tany malemy efa vonton'ny rano maloto avy ety ambony. Ataoko fa teknisianina matihanina ianareo anao izany. Tsara ihany koa ny fanampiana ireo Governoran'ny Faritra amita ny lalana izay nasiana tanjona 200km isan-taona. Mila mazava kosa ny teti-bola ampiasainy fa tsy ilay 2 miliara ariary akory no ahavitany izany. Izay ny 1miliara ariary fampandehanan-draharahan'ny faritra, ary 1 miliara ariary anaovana fotodrafitrasa.
Lamentable, déplorable, d’une médiocrité consternante… Des mots appartenant tous au même champ sémantique. Ils décrivent mieux la scène digne d’une œuvre surréaliste montrant l’environnement dans lequel se déroulent les activités pédagogiques à l’école primaire publique de la ZAP d’Antetezana, CISCO Manandriana, DREN Amoron’i Mania. La localité se trouve à 53 km au sud d’Ambositra et à moins de 7 km de la nationale 7 menant à Toliara.Les photos publiées sur Facebook parlent d’elles-mêmes et rendent compte combien le secteur éducatif est négligé à Madagascar. Le cas d’Antetezana est illustratif de ce qui se passe dans les zones qui ne verront de sitôt émerger des "EPP manarampenitra" tant vantées aujourd’hui.
Sary nindramina SIGM
Tsy misy tsy mahalala ny tetikasa Soalala izay saika hametrahana ny fitrandrahana vy tamin'ny tetezamita izay nahazoana vola 100 000 000$ nahafana nampiodina ny fitondrana tetezamita nandritra ny 5 taona, niaraka tamin'ny bois de rose. 2000 taona lasa, fony andron'ny mpanjaka ezipsianina, dia hitatsika tamin'ireny fasan'ny mpanjaka tany anaty pyramida ireny, fa nitemotra volamena ny trano vorona misy ny mpanjaka, fa ny mpanjaka kosa dia nampitazomina lefona vy.
Ny Kraoma no tompon'ny permis ao amin'io faritra Ambilobe io, fa dia mahagaga fa na ny karaman'ny mpiasa aza efa miangona firy volana tsy voaloa. DG mpisolo toerana no misy, fifanarahana tamin'ny Rosianina no nampiodina kely ny sampana famokarana kraoma tao Briville, amin'izao, orinasa karana no nomena ny asa fitrandrahana, naka mpiasa hafa fa ireo mpiasan'ny Kraoma nampakana sisiny. Ankehitriny, noràrana ireo mpitrandraka madinika tsy hiasa ao Andavakoera fa hoe ala-fady harovana, nefa vao roa volana lasa izay, vao mangady 3metatra ny alaliny dia efa nahita volamena 0.5kg raha kely. Feno mpitandro ny filaminana ny toerana amin'izao, ary betsaka ireo nosamborina. Misy galerie souterraine efa vitan'ny Frantsay tamin'ny 1918 Efa vita avokoa ny fikarohana rehetra, efa voaporofo ara-tsiantifika, efa misy galerie na tunnel anaty lavabato efa namboarin'ny Frantsay tamin'ny 1918, efa nahazo 1tonne volamena izy tamin'izany fa nototofany ny vavan'ny tunnel.
samedi, 30 janvier 2021 13:43
Mety mahasoa antsika mpamboly : Ahoana ny fikajiana ny habean'ny tatatra hanondrahana tanim-bary
Matetika isika mpamboly dia miandry teknisianina hatrany, na avy dia manamboatra amin'ny heverantsika azy, na mampitovitovy amin'ny an'ny hafa rehefa te hanamboatra barazy, na lakan-drano hanondrahana tanam-bary na tanim-boly. Ny vary no fambolena anisan'ny mila rano, ka io no hitondrantsika fanazavana tsotsotra. Ny tanim-bary dia mila rano eo amin'ny 2-7 cm eo mandritra ny fikarakarana azy, ary 8-9cm eo na iray nje amin'ny tanana mandritra ny fotoam-pitomboany ao anatin'ny 130 andro. Rano any amin'ny 16-20 cm eo izany no ilainy, na halavan'ny taolan-katsaka. Kajy tsotra 1- Ny fatran-drano ilaina Raha 10m x 10m = 100m² na 1 ara ny habean'ny tany iray valaparihy, refeso amin'ny tongotra mamindra, ny dingana iray fohifohy dia atsa-metatra, mamindra havia, havanana indray izany ny 1 metatra. Dia isaina ny 10 metatra.